MicroStrategy ၏စီအီးအိုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာအား Bitcoin Portfolio တိုးမြှင့်ပြီးနောက် BTC တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၂၅,၀၀၀,၀၀၀ အထိအရည်ပျော်သောရေခဲများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။
၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် MicroStrategy သည်စုစုပေါင်းဝယ်ယူမှုဒေါ်လာ ၁၇၅ မီလျံဖြင့်အပို bitcoins ၁၆၇၉၆ ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့သည်စုစုပေါင်း ၀ ယ်ယူမှုဒေါ်လာ ၄၂၅ သန်းဖြင့်စုစုပေါင်း bitcoins ၃၈၂၅၀ ကို ၀ ယ်ယူပြီး ၀ န်ဆောင်ခများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များပါ ၀ င်သည်။
- မိုက်ကယ်ဆာရို (@michael_saylor) စက်တင်ဘာလ 15, 2020
MicroStrategy announced its initial $250 million BTC investment in August, ငြင်းခုံ inapress release that Bitcoin isabetter store-of-value asset class than fiat currencies, especially given the slate of recent pandemic-related financial stimulus measures implemented by governments around the world. The firm now views Bitcoin as “the principal holding in its treasury reserve strategy.”
MicroStrategy operates out of Virginia. The firm ကပြောပါတယ် its total revenues for the second quarter of 2020 were $110.6 million, with gross profit at $86.6 million.
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: The Daily Hodl တွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါ။ Bitcoin, cryptocurrency သို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်အန္တရာယ်မြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမပြုလုပ်မီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ သင်၏လွှဲပြောင်းမှုများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်သင်၏စွန့်စားမှုဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်ခံရနိုင်သောရှုံးနိမ့်မှုအားလုံးသည်သင်၏တာ ၀ န်ရှိသည်ဟု ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပေးပါ။ The Daily Hodl သည်မည်သည့် cryptocurrencies သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်မအကြံပြုပါ၊ The Daily Hodl သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးလည်းမဟုတ်ပါ။ The Daily Hodl သည် Affiliate စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်နေသည်ကိုသတိပြုပါ။
Tags: Bitcoin, BTC, စီအီးအို, နှိုင်းယှဉ်, ဒေါ်လာစျေး, ICE, တိုးမြှင့်, အရည်ပျော်, မင်္ဂလာပါ, အစုစု
Polkadot စီမံကိန်းများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်သူတို့၏တိုကင်များကိုတူးဖော်နိုင်လိမ့်မည်